एक फरक अनुभवका लागि विश्वमा आईस होटलहरू यात्रा समाचार
Susana Garcia | | आवास, सामान्य, आराम
के तपाईंले कहिल्यै एक मा रहने विचार गर्नुभयो? आइस होटेल? ठिक छ, हामी यो सोच्दछौं कि यो एक राम्रो विचार हो, एउटा धेरै फरक अनुभवको आनन्द लिने तरिका, सब-शून्य होटेलमा, बरफले घेरिएको र विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै। किनभने यी बरफ होटेलहरूमा तिनीहरू तपाईंलाई इग्लोमा सुत्न दिँदै सीमित छैनन्, तर तिनीहरू बाँच्नको लागि अनुभवहरूको संचय हो।
को बरफ होटेलहरू तिनीहरू सामान्य छैनन्, विशेष गरी किनभने तिनीहरूलाई निश्चित सर्तहरू कायम राख्न आवश्यक छ, त्यसैले विशाल बहुमत सबै वर्ष खुला हुँदैन, तर केवल जाडो मौसममा। जे भए पनि, संसारभरि थुप्रै छन् जुन धेरै चाखलाग्दो हुन सक्छ, त्यसैले ध्यान दिनुहोस् यदि तपाईंलाई नजिक छ भने।
1 फिनल्याण्ड मा Igloo गाउँ Kakslauttanen
2 डे गलेस क्युबेक, क्यानाडामा
3 जुक्कासजर्वी, स्विडेनमा आईस होटल
4 फिनल्याण्डको किट्टिलीमा स्नो गाउँ
5 रोमानियामा बलिया लाक आइस
6 नर्वे मा Sorrisniva Igloo होटल
7 म्याक्टो-ला-प्लाग्ने, फ्रान्समा गाउँ इग्लो ब्लैकशिप
8 किर्केनेस स्नोहोटल सोर-वारन्जर, नर्वेमा
9 ग्रान्डभलिरा, एन्डोराको इग्लो होटल
फिनल्याण्ड मा Igloo गाउँ Kakslauttanen
यो आवास एउटा हो जस्तो देखिन्छ सबै ल्यापल्याण्ड मा सबै आकर्षक। होईन, हरेक दिन तपाई हिउँले बनेको इग्लुको भित्र ओछ्यानमा पल्टिएको उत्तरी लाइट्स देख्न सक्नुहुन्न। यी बासस्थानहरू गिलासको छतको साथ छुट्टै इग्लोज मिलेर बनेको हुन्छ कि आकाशको दृश्यहरू बुझ्न र उत्तरी बत्तीहरू नबिर्सनुहोस्। सान्ता क्लॉज सहर नजिकै छ, उसलाई भेट्नको लागि, र अन्य गतिविधिहरू पनि गरिन्छ जस्तै स्कीइ or वा माछा मार्ने, निश्चित रूपमा, बरफमा।
डे गलेस क्युबेक, क्यानाडामा
यो बरफ होटेल क्युबेकमा सब भन्दा प्रख्यात छ, र शहरबाट केवल दस मिनेटमा। यो एउटा अचम्मको होटेल हो, किनकि हरेक वर्ष चिसो आउँदा यो केही हप्तामा निर्माण हुन्छ र वसन्त आउँदा जनवरीदेखि मार्चको अन्त्यसम्म खुला रहन्छ। प्रकृति केवल आफ्नो कोर्स चलाउन र तल होटल पग्लन अनुमति छ। प्रत्येक वर्ष विषयवस्तु र होटल भित्र भित्री सजावटका उपायहरू बनाउँदछन्, त्यसैले प्रत्येक मौसम फरक हुन्छ। यसमा तपाईं एक पाउन सक्नुहुन्छ विवाह समारोहहरू मनाउन चैपल आश्चर्यजनक र एक बरफ पट्टी। बाँकी प्रत्येक वर्ष पत्ता लगाउनु पर्छ।
जुक्कासजर्वी, स्विडेनमा आईस होटल
स्वीडेनमा यो होटल पहिलो आइस होटेल थियो यो करीव २ years बर्ष पहिले निर्माण गरीएको थियो। यो आर्कटिक सर्कलको नजीक छ र सबै भन्दा ठूलो आइस संरचना रहेको छ। सबै चीजहरू बरफबाट बनेको हुन्छ, यहाँसम्म कि ओछ्यान पनि, जुन सुत्नको लागि बरफले ढाकिएको छ। भित्र हामी बरफ राख्न माइनस पाँच डिग्री मा हुनेछौं र होटेलमा तपाईले कलाकारहरू द्वारा सिर्जना गरेको अल्पकालिक शिल्पकलाहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ जसले पाहुनाहरूलाई आनन्दित तुल्याउने हिउँको मूर्ति बनाउनुहुन्छ।
फिनल्याण्डको किट्टिलीमा स्नो गाउँ
यो होटेलमा छ फिनिश ल्यापल्याण्ड र यो एक भिला जस्तो निर्मित आवास हो, बत्तीहरू सहितको सुरुnelहरू सहित जुन सब भन्दा पुरानो क्षेत्रहरूतर्फ डो .्याउँछ। एक रेस्टुरेन्ट र एक आइस बार र तपाईंको आफ्नै रात्रि क्लब। कोठामा भूमिगत सौना छ जुन तातो हुन्छ सबैको लागि चिसो हुन्छ।
रोमानियामा बलिया लाक आइस
सबै बरफ होटल फिनल्याण्ड मा छैनन्, र यो एक हो पूर्वी युरोपबाट पहिलो। Balea Lac आइस, Balea तालको छेउमा एक आइस होटल। आज यो एउटा होटेल हो जहाँ केवल बरफमा रहनु मात्र सम्भव छैन, तर यसमा स्की स्लोपहरू, एउटा बरफ रेस्टुरेन्ट, एक बार र चैपल पनि छ। प्रत्येक वर्ष यो एक फरक विषयवस्तुद्वारा प्रेरित बनाइएको हो, पाहुनालाई सँधै केहि नयाँ प्रस्ताव राख्ने।
नर्वे मा Sorrisniva Igloo होटल
मा अल्ता नदीको किनारनर्वे मा, तपाईं यो होटेल पाउनुहुनेछ। यो होटल अधिक गोपनीयता प्रदान गर्दछ, यो अरू भन्दा ठूलो छैन तर यो ध्यान निजीकृत छ। बिहान तपाईं सौनालाई तातो राख्न रमाउन सक्नुहुन्छ, र दिनको समयमा धेरै गतिविधिहरू गरिन्छ, जस्तै स्नोमोबाइलमा वा रेन्डियरको साथ स्लीहमा।
म्याक्टो-ला-प्लाग्ने, फ्रान्समा गाउँ इग्लो ब्लैकशिप
सबैजनाले फिनल्याण्ड वा अलास्काको लागि यात्रा वित्त गर्न सक्नुहुन्न, हामीसँग पनि नजिक केही प्रस्तावहरू छन्। यो होटल फ्रान्स मा, Savoie क्षेत्र मा अवस्थित छ। यो एक महान र हो आरामदायक शहर इग्लोस बाट बनेको
किर्केनेस स्नोहोटल सोर-वारन्जर, नर्वेमा
नर्वेमा रसियाको सिमानामा किर्केनेस रहेको छ। तपाईं फजोर्डहरूलाई नदेखी एक रेस्टुरेन्टमा खाना खान सक्नुहुन्छ, एयरपोर्टबाट एमा आइपुग्नुहोस् हस्की स्लेज र उत्तरी बत्तीहरूको आनन्द लिनुहोस्। होटलमा अनुभवहरूको सम्पूर्ण संसार जुन प्रत्येक वर्ष विशेषज्ञ कलाकारहरू द्वारा मूर्तिकला गरिएको हुन्छ।
ग्रान्डभलिरा, एन्डोराको इग्लो होटल
यो हो नजिकको आइस होटेल जुन हामी फेला पार्न लाग्यौं, र यो एन्डोरामा छ। यो सानो प्रस्ताव हो, किनकि यसमा केवल छ वटा कोठा छन्, तर कुनै श without्का बिना हामी यसलाई समावेश गर्दछौं किनभने यो हाम्रो नजिकको प्रस्ताव हो। तपाईं झोला आकारहरू संग आइस कोठामा झोला र furs मा सुत्न सक्नुहुन्छ। खराब होइन आइस होटेलको अनुभवको साथ सुरू गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » एक फरक अनुभवका लागि विश्वमा आईस होटलहरू
बर्लिनमा hos होस्टेलहरू